जापानबाट नेपाली मतदातासंग अाग्रह - Kantipath.com
जापानबाट नेपाली मतदातासंग अाग्रह
आसन्न स्थानीय निर्वाचन नजिकिदै गर्दा चुनाबको प्रचारप्रसार बढेको छ । स्थानीय निर्वाचन बैशाख ३१ गते देशभर गर्ने भनेपनि अब दुई चरणमा हुने भएको छ । बाकि स्थानमा स्थानीय निर्वाचन जेठ ३१ गते तोकिएको छ । यसैबीच सत्ता हस्तान्तरण देखि जेठ १५ मा गरिने बजेट घोषणा पनि प्रभावित हुने देखिन्छ ।
बिदेशमा रहेका नेपालीले समेत यो निर्वाचनलाई विशेष चासोका साथ लिएका छन । यसै सिलसिलामा जापानमा रहेका नेपालीबाट यस्तो अाग्रह गरिएको छ:
चुनाव हुन्छ हुन्न त्यो अझै स्पष्ट भएको छैन तर चुनावी सरगर्मी भने निक्कै बढ्दै गएको छ । आगामी बैशाख ३१ मा तोकीएको स्थानीय चुनाव २८३ वटा स्थानीय निकायको चयन गर्नेछ भने बाँकी स्थानमा भने अर्को चुनावले चयन गर्नेछ ।
बैशाख १९ को मनोनयन दर्ता पछि लगभग चुनाव हुने नै पक्का जस्तो देखिएको छ । सबै दलले आ-आफ्नो उमेद्वार पनि छानिसकेका छन् । तपाई हामीले पनि आफ्नो क्षेत्रमा उमेद्वार को भयो भन्ने थाहा पाईसकेका छौ । तर चुनावमा कसलाई भोट दिनु सहि र कसलाई दिनु गलत पनि अनी को बाट आफ्नो ठाँउमा परिवर्तन हुन्छ त्यो चुन्ने साँचों पनि हाम्रै हातमा छ ।
यो चुनाव हामी सबैको लगि तीन अर्थमा महत्वपुर्ण छ ।एक झण्डै २० वर्ष पछि स्थानीय चुनाव हुदैछ, दुई नयां संरचना अनुसार ७४४ स्थानिय निकाय क़ायम भएर निर्वाचन हुदैछ भने तीन ससस्त्र बिद्रोह पछि र संविधान सभाबाट संविधान बने पछिको ऐतिहासिक घडीमा चुनाव हुंदैछ ।
गत स्थानीय चुनावको जन्मिएका थिएनौ त कति थाहा पाएर पनि भोट दिने उमेर नपुगेर बन्चित थियौ । अघिल्लो चुनावमा भाग नलिएका झण्डै ३० लाख मतदाताले यो चुनावमा भाग लिदैछौ । त्यसैले यो चुनाव जति महत्वपुर्ण छ त्यति नै नेतृत्व चुन्ने कुरामा पनि जिम्मेबार बन्न जरुरी छ ।
हामी एक्कासौँ शताब्दिका सचेत नागरिक हौ हामीलाई कुन सहि कुन गलत अबश्य थाहा छ ।तर सबै थाहा हुँदै गर्दा पनि हामी पटक पटक चुक्ने गरेका छौ ।कारण पनि हामी आफै हौ त्यो पनि थाहा छ तर हामी किन चुनावमा गल्ती गर्छौ अनी पछि पछुताउछौ त ? उत्तर सजिलो छ ,हामी राम्रोलाई हैन हाम्रोलाई,ब्यक्तिलाई हैन पार्टीलाई र ब्यक्तिगत लाभको आशा राखेर उमेद्वार चुन्छौ र समृद्धिको सपनालाई तिलाञ्जली दिने गर्छौ ।
अब भने हामीले सोच्ने बेला आएको छ ,हाम्रालाई हैन राम्रालाई ,पार्टीलाई हैन ब्याक्तीलाई छानौ । जसले ब्यक्तिगत र राजनैतिक स्वार्थभन्दा माथी उठेर ,जातजाती ,लिङ्ग, भाषा लगाएतको भेदभावबाट पर बसेर आफ्नो सिङ्गो शक्ति स्थानीय निकायको समृद्धको लागि बिकासको लागि खर्च गर्छ त्यसलाई चुनौ । साथै आफ्नो ठाँउमै बसेर ,समाजलाई चलायमान बनाउने,इमानदार ,क्षेमतावान र कुशल नेतृत्वदायी भुमिका निर्बाह गर्नसक्ने,ब्यक्ति चुनौं ।
हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाएर गृहयुद्ध सम्पूर्ण रुपमा लगभग समाप्तिको बाटोमा पुर्याएका छौ ।यो पनि पछिल्लो संविधान सभामा केहि हद सम्म सहि नेतृत्व चुनेर पठाएकाले पनि हो । अब भने देशलाई बिकासमा कायापलट बनाउने नेतृत्व चुन्ने अबसर झण्डै २० वर्ष पछि पाएका छौ । यो नै गर्वको बिषय हो । तर यहि अबसरलाई सहि ढंगले उपयोग गर्न सकेनौ भने पहिलो संविधान सभा जसरी नै हाम्रो समृद्धिको सपना पनि सबै तुसरापात हुनेछ । अब पनि प्रतिनिधि छान्दा बिचार गरिएन भने भोलीका दिनमा पछुतो मान्दै आफैले चुनेको ब्यक्तिलाई धारे हात लाउदै बस्नु पर्ने हुन सक्छ ।
झण्डै १५ वर्ष देखि हामि स्थानिय प्रतिनिधि बिहिन भएर बस्न बाध्य छौ । एक सचिव र दलको नेताको आदेशको भरमा स्थानीय निकाय चलिरहेको कुरा सबैलाई थाहा नै छ । जसको कारण देशमा गृहयुद्ध समाप्त भएको वर्षों हुँदासम्म बिकासको सपना सपनामै सिमित भईरहेको छ । १० वर्षें गृहयुद्धमा ध्वस्त भएका संरचना पनि बन्न सकेको छैन भने अझै भुकम्पले धेरै ध्वस्त बनाएर गएको छ । जसको कारण बिकासका गतिबिधिहरु कसरी परिचालन गर्ने कसले नेतृत्व गर्ने हानाथापमा सिमित हुन पुगेको अबस्था छ । भौतिक सरँचना लगाएत बिभिन्न बिकासका परियोजनाहरु प्रभाबित बन्न पुगेको छ ।यि सम्पुर्ण रुपमा अस्थब्यस्त रहेको संरचना उठाउन सक्ने नेतृत्वको आबश्यकता महसुस गरी प्रतिनिधि चुन्न जरुरी छ ।
हाम्रो देश प्राकृतिक रुपमा यति धनी छौ,सांस्कृतिक रुपमा यति समृद्ध छौ र हामी बिर गोर्खालीका संन्तान अझैपनि यति धेरै पौरखी छौ । जुन कुरा बिश्वोको जुनसुकै देशमा पुगेर श्रम गरीरहेको नेपालीहरुको प्रशंसा गरेको कुराबाट पनि हामीले सजिलै थाहा पाउन सक्छौ । सबै कुरामा सम्पन्न छौ यति प्रचुर संभावना हुदै गर्दा पनि किन हामी समृद्ध बन्ने सक्दैनौ ? हो सक्छौ जसको उत्तर दिने बेला आएको छ जुन सदुपयोग गर्न जरुरी छ ।
यदि फेरि पनि हामी दलगत,ब्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्ने हो भने अझै पनि डिग्रिको सर्टिफ़िकेट हातमा राख्दै खाडी र मलेसीयाको सपना देखिरहनु पर्नेछ । हामीले आफ्नो यौवन अर्काको देशमा गुजार्ने छौ ,पारीवारीक वातावरण बिगार्ने छौ अनी फेरी राजनितीलाई दोष दिदै खाडिको तातो गर्मीमा काम गर्दा गर्दै सुनौलो भविश्यको सपना बोकेर हिडेको आफन्त बाकसमा फर्किएको देख्नेछौ ।अनी राजनिती दल र दलको प्रतिनिधीलाई सराप्दै रुनेछौ ।
त्यसैले एक पटक सोचौ,बिदेशको गर्मीको दु:ख ,डिग्रीको सर्टिफ़िकेट सिरानी, अनी सर्टिफ़िकेट थन्क्याएर खाडि मलेसीयाको सपना देख्ने दिन । अनी सोचौ दैनीक बिदेशीने को लर्को र फर्कीने लाशको बाकस र आमाको रुवाई र छोराछोरी टुहुरो बन्ने दिन, अनी बिचार गरौ आफ्नो यौवनलाई बिदेशमा बेचेको दिन , त्यसैले अब सोचौ त ति दिन कति दर्दनाक छन् , फेरी पनि त्यस्तो दिन नआओस । जसको लागि स्थानीय प्रतिनिधि छान्दा बिचार गर्ने की । अनी हेरौ चिन , भारत लगाएत छिमेकी देशको प्रगती र सोचौ ति देशमा भएको समृद्धिको गति अनी मात्र मतपत्रमा भोट खसालौं ।
तिनपाटन गाउपालीका सिन्धुली
हाल टोकीयो जापान
Previous Previous post: चिकित्सकको कार्यकक्षका शौचालय देख्दा सद्दे मान्छे नै बिरामी हुने अवस्था
Next Next post: जन्ती बोकेको जिप दुर्घटना, एकको मृत्यु र ९ जना घाइते